Akụkọ - libya-canada.org
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-ehichasị na akụkọ ihe mere eme nke Godzilla, ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị (ebe aekere ahụ?)
N’ebe a t Aces Casino Entertainment, also a maara nke ọman’akụkụ ndị a-ebe a-akụkụ dị ka ụlọ ọrụ Orange County Casino Party nke dịn’ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ, naanị anyị hụrụ ihe efu na-adọrọ mmasị (Ed. Rịba ama: NA egwuregwu cha cha ndị na-adọrọ mmasị, kwa.) . Onweghikwa ihe kpalitere mkparịta ụka ụka na-agan’ihun’ime ụlọ nzukọ nke Experts Casino dị ka nke a lil’ditty…
G .Godzilla emeela ihe nkiri esemokwu karịa James Bond.
Ama m, o siiri m ike ikwenye, yana. Na-eri m nri ehihie. Nke ahụ na-echetara m – Ya adịla mgbe ị ga-emegide otu ndị na-ewu ụlọ na ndị otu a Aces Casino. Ha na-achọkarị ụzọ ha ga-esi ghọgbuo anyị ndị na-ede blọgụ d e mkpụrụ self love anyị tara ahụhụ.
Yabụ, maka ọnụ ahịa pizzas 2, nkịta na-ekpo ọkụ d e anụ ọkụkọ d e Costco, ndị otu blọọgụ ebe a na Aces Casino, ndị na-agba agba agba agba abalị oroma, ji mpako na-ewetara ndị niile, njedebe-All-You tubing nke ahụ na-akọ akụkọ ihe only eme nke nnukwu nnụnụ ahụ, nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke a maara dị ka”Godzilla, KING OF The Monsters!”
Yep, nke ahụ bụ ya. Dọ aka na ntị – Idị IMAX bụ LOUD.
Nke ahụ ga-eme maka izu a nke Monday Aces Casino Blog ikenye …. Back then Thursday na ihe goofy, irreverent blather.
Un – Nke ahụ kwara emo maka”Ahụekere?” Echere m ha na ndị Gojira na-akpakọrịta, mana ọ dị ugbu a t ọ bụ naanị Mothra ka ha na-abụ. Sue m. Ahụekere, Ahụekere, nweta ahụekere ebe a …
Hụ m n’anya obere ego. Ha bu umu okuko abuo n’ime ocha.
Oh, otu ihe ọzọ … Aces Casino Entertainment dị nnọọ ghọrọ “Top Performer” na weebụsaịtị Gig Salad. Naanị ihe ọzọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ otu ụlọ ịgba chaa chaa kacha elu, Aces Casino!
2-N’ihi-2! Ọ dịghị njọ, mana anyị nwere ike ịme nke ọma. (Dị ka ogologo oge anyị nwere mmanụ aeyụ, “Super-Bowl-Predicting Dog” Na-atụtụ! Mana Nke mbu, Backfọdụ Akụkọ Mere Eme na Otu Anyị Si Bịa Ebe A
(Ed. Rịba ama: Afọ”Experts Casino Blog Super Bowl Choice Series” bụ otun’ime njem anyị kachasị amasị na Blog”aterlọ ihe nkiri nke Unusual” website Id mmalite anyị na 1994, ruo Febụwarị. 2016. Anumanu di iche iche only anyi nile. Ndị un – eburu aha 21 meririn’usoro, ruo mgbe Onyx, Zoo Panther, họpụtara Carolina, nke Denver Broncos tụfuru na Super Bowl 50. N’ihi ọnwụ ahụ, ndị ọrụ blọọgụ n’oge ahụ kpebiri ịghara ime nhọrọ Super Bowl ọzọ. , na enwu furu efu.
Ọ bụghị otú ahụ.
Yabụ, mgbe ọ gachara afọ abụọ, ma gafere Super Bowls 51 na 52, Experts Casino Blog ekpebiela ịlaghachi d e mgbọrọgwụ nke ụlọ ọrụ ahụ, miniature weghachite Experts Casino Entertainment Super Bowl 53 Choice Series, na-ewere ndekọ nke 21 na-enweta mmeri na otu ọnwụn’ime Super Bowl 53.
Na, iji nyere ihe aka na akụkọ ihe mere eme nke nhọrọ ahụ, anyị ekpebiela igwu egwu otun’ime akwụkwọ ndị okenye Experts Casino Blog, nke mere ka akụkọ ihe mere eme nke”họpụta.” Nke a Website biputere na mbụ na February 4th, 2016. Ka ihe omumu a malite.)
Obi abụọ adịghị ya, ndị ọrụ nọ ebe a t Aces Casino Entertainment (AKA ụlọ ọrụ kachasị mma nke ụlọ ịgba chaa chaa d e abalị na ọdịda anyanwụ) ejirila ọrụ kachasị mman’ụwa. Chee echiche banyere ya – anyị ga – ewetara ndị otu egwuregwu anyị na – agba ara d e ụfọdụ ihe omume kachasị mma na ndịda California, hob-nob nwere ọtụtụ nnukwu ndị ahịa na ndị ahịa buru ibu, yana otu ihe ọzọ – Anyị kpọrọ ya ọrụ nke abụọ –
Na-ahọrọ ndị mmeri Super Bowl.
Ọfọn, ọ maliteghị n’ụzọ ahụ n’ezie. Ezigbo ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na-agba agba nke ụlọ ọrụ anyị tọrọ ntọala d e Eprel 15th, 1994, wee chọpụta na ihe anyị niile only karịa onye ọ bụla ọzọ na ụlọ ọrụ anyị bụ inye ndị otu ụlọ ịgba egwu abalị Las Vegas abalị, ma nwee obi ụtọ ọ bụla onye ọ bụlan’ime ndị ahịa anyị narị otu narị dị mma karịa onye ọ bụla ọzọ gburugburu na anyị kooky, adịghị asọpụrụ ụdị. Ndị mmadụ hụrụ anyị n’anya.
Ya only, t njedebe nke afọ mbụ anyị, mgbe NFL Championship Game kwa afọ bịara, nke a makwaara dị ka Super Bowl, nke ọma, anyị chere d e ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịnye ụwa na nhọrọ anyị nke mmeri nke egwuregwu ahụ,”na ụdị nke anyị na-asọpụrụghị.” Anyi choputara onye kachasi nma ka anyi chotara anyi karie ogige onye agbata obi anyi, Henny Penny, nke Knott’s Berry Farm na Buena Park Nke a bụ njikọ nke usoro ihe ọkụkọ-nke pickin’akụkọ ihe only eme…
Ọfọn, Henny họpụtara 49ers na ụbọchị ahụ dị mma na mbido 1995 (Ed. Rịba ama: tupu ịntanetị, ọ dị nwute), yabụ, kwa afọ d e mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-agagharị na nke Knott, na-etinye onye na-elekọta ọkụkọ ahụ ruo mgbe ọ’Ka anyị jiri piano na-akpọ prognosticator maka omume ọjọọ anyị na-agba chaa chaa, ma mee ka Henny họrọ onye mmeri ọzọ. Nke o simply. (Dallas.)
Ọzọ. (Green Bay.)
Ọzọ. (Denver, nke anyị chere na ọ bụ SURE failure through the Packers.) Na Onye ọzọ. (Denver, Ọzọ.)
Ihe niile dị na ya, Ọkachamara dina na-acha odo odo ahọrọla ndị mmeri asaa na-agba ọsọ na ahịrị, na-emechi ihe ngosi ahụ na mmeri un nke Green Bay na February 1st, 2011. Nke a bụ njikọ nke mpempe akụkọ ihe only eme…. Mgbe ahụ bịara saddbọchị kachasị ewute bọọlụ bọọlụ anyị – Ọwa akụkọ mpaghara abụọ (Ed. Rịba ama: Websiten’ọnụ anyị nyere. Hey, mgbasa ozi na – akwụghị ụgwọ. Enweghị ike iti ihe ahụ.) Bịara t even akụkọ akụkọ Henny’s Super Bowl 46 weghaara t even ogige isiokwu ahụ. O bu ihe nwute, mgbe anyi biara d e okpu agha anyi abuo dika kwa afo gara aga, ndi oru ugbo Berry Farm kwụsịrị ihe ngosi a ozugbo, na-ekwu (n’eziokwu, dika anyi choputara) na nhazi Henny Penny abiala ezumike nká. abụghịzi ihe ngosi na ogige ahụ.
Onweghi onye maara ebe ọkụkọ ahụ dị (Ed. Mara: Anyị niile nwere ike KWURU,n’ezie, na ụlọ oriri na ọ Dinụ Chụ Chicken dị naanị yaadị 40), wee chọpụta d e anyị enweghị isi. Na … Ngwa ngwa apụ apụ n’ụlọ ahụ.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị maara ihe ọ bụla gbasara Experts Casino Entertainment, ị mara na anyị ga-achọta ụzọ ọzọ iji nweta nhọrọ anyị. Ya only, anyị nyochara ịntanetị maka anụmanụ ọ bụla ruru eru nwere ike ịgan’ihu na ọdịnala anyị. Ya only, t 2012, anyị tụgharịrị na Papa, obere obere ịnyịnya ibu, bụ onye wepụtara ndị New York Giants ahụ ngwa ngwa (Ed. Rịba ama: Gasp! Anyị chere na nke ahụ bụ onye emeriri n’ezie, megide 18-0 Patriots!) … Nke a bụ nke ahụ bulie …
Ndi bu ibu ?? Chei, ọ bụ ya mere anyị ji eji anụmanụ. Winn-ah, mern-ah . .
Na 2013 (mgbe ndị un – elekọta Papa gwara anyị ka anyị pụọ ma ghara inye ha nsogbu maka nhọrọ ọ bụla ọzọ), anyị tụgharịrị na Baby, ezì ezi na-ezi ezi pachyderm, miniature nweta mmeri anyị nke iri na itoolu…
Gaa Ugoloọma! (Na nke kachasị esemokwu anyị.)
Ugbu a, mgbe Baby wepụtara egusi Ravens, anyị gara ngwa ngwa ahụ miniature tụọ aka ịghara ịgan’echiche mmadụ na ndị 49ers”ga-eri” ugoloọma. Hey, anyị na-eji aka mbụ abanye, na Ravens bụ nke ahụ. Lelee vid ahụ maka onwe gị, nke ahụ bụ onye mmeri!
2014 bụ Teddy Bear, ” the Hedgehog. (Ed. Mara: Ọ bụ PORCUPINE, ị dope, B NOTGH a Hedgehog!) Nhọrọ a, ekwenyere m.
2015 mechara bụrụ snafu mbụ anyị, mgbe anyị họọrọ mmanụ aeyụ, Aces Casino Mascot / Puggle, ka emails were maka SB 49. Mana, mgbe ọtụtụ gbalịrị gafee ụbọchị abụọ iji nye ya ohere ịme akụkọ ihe only eme, ọ jụrụ ọ bụla oge. Nke a bụ njikọ ahụ …
Ihe dị mma, Honey. Angel enthusiast, kwesịrị ịma.
Enweghị nsogbu …. Nhọrọ ahụ dị maka Super Bowl 50, also a na-eburu ya na Mọnde, February 1, website Id Onyx, Panther si na Miami Zoological Society (Ed. Rịba ama: Naanị nyochaa ebe anyị na-edebe akwụkwọ maka nke ahụ), na anyị na-aga maka onye mmeri iri abụọ n’otu abụọ enwetụbeghị ụdị ya. Enwe obi ụtọ na Super Bowl, anyị ga-ahụ gị azụ ebe a t Mọnde, yana Pickin’-post-mortems!
DFFL – WWIT – Izu 13 Izu – DFFL Akwụkwọ Akụkọ
Izu 13 – Tzọ 12 nke Ikpeazụ
Ọ D OK MMA, ọ bụrụ na ị ga-agwa m, tupu Izu 13 nke Izu 13 na DFFL bidoro, na naanị otu anọ ga-etinye akara ọnụọgụ abụọ na WWIT, mgbe ibe dị na ahịrị na ihe niile, agara m agwa gị t I na-ara ara.
Emehie ọzọ, Experts.
Usoro DFFL gara haywire, na-acha uhie uhie na nọmba niile. Enwere ike inwe onye mmeri t Enforcement Division? Kedu ihe ọjọọ WWIT ikpeazụ mepụtara? Ndi Jags meriri egwuregwu isii na efu? Na 2018? Na onye ọ bụla isi na ụyọkọ?
Atụla egwu, ndị enyi m – maka taa, A ga-aza ajụjụ gị niile. (Ewezuga ihe arụ Jags / Immunology.) Ihe that a niile na-ezukọta na otu nkata onyinye anakọtara, ka anyị gwụchara oge 2018 DFFLn’ụdị, website Id ịjụ ajụjụ ahụ MA…….
“Gịnị Ka M Na-eche?”
Mgbe m & huru na otutu ndi otu DFFL gbawara ebe ha no t ngwucha izu a, agara m ichoputa ka Anthony Pitassi nke Mr. Go Lucky business only. Ma eleghị anya, ọ lanarịrị ma wepụ mmegide ya.
Um… Mba Ọ dịghị mma. Nnukwu oge na-adịghị mma. Oh-oh. Cheta – MGL na-agba ọsọ t Expert a decoration ruo izu ole na ole, ugbu a. Ma website t bench-jọrọ njọ-akara nke MGL wepụtara, Robert Abundis nwere ohere iji zuo ohi ahụ websiten’aka Anthony nwere akara ngosi dị mma na izu 13.
Robert gbara ọsọ na aha ahụ, mana mgbe Isiah Crowell na Ryan Tannehill wepụtara isi oche 17, nke ahụ mebiri ohere ọ bụla nke mgbako elekere 11th. Na, na nke ahụ, egwuregwu ahụ agwụla. Anthony Pitassi na MGL bụ onye mmeri 2018 Professional celebrity!
Maka ndekọ na Week 13 Professional na-egwu, akara ọlaọcha gara Mob Squad na Aha Gị Ebe a, onye tụfuru isi 6 t chair, dị mma maka 5 Expert ọ bụla. Ihe nchara ọla maka izu nke iri na atọ gara Baltimore Ravens, bụ onye tụfuru 8 isi oche ya, ọ dị mma maka akara 3 Expert. Otu onye mmeri ritere uru gara Burbank, onye mechara dochie bọọlụ Italia ahụ anaghị egwu egwu.
Ọnụọgụ ikpeazụ na 2018 Professional Section –
MGBE MBU – MGBE IZU ITA 13 – DFFL 2018
1. Maazi Go kechioma (44.5 isi) – Ekele t a oké oge, Anthony!
2. Ubi na-egbu egbu (ihe 40) – Ya only nso, Robert. Anyị ga-ahụ gị na 2019!
3. Aha gị ebe a (37 isi) – Kachasị mma nke Ben ga-enwerịrị, Ryan. Mma.
4. Burbank Thumpers (34 isi) – Ngwunye egwuregwu ọzọ na 2018.
5. Mkpọchi (isi 33) – Lockett only gị ya ọzọ, Jim!
6. Run & Gun (ihe 27) – My choice for Pro Division Champion, 2019.
7. Onye na-ewe ihe ubi (ihe 24) – Mkpụrụ kachasị nke DFFL!
8. Baltimore Ravens (23 isi) – Agbachitere DFFL ngalaba-mmeri anya ọzọ trofi!
9. Norsemen (22 isi) – Ọnwụ siri ike vs. The Placentia Bolts, Rob. Lee gị na 2019.
10. Trojans (isi 21) – Amaara m Andy’ll laghachi azụ. Nwetara ihe ojoo ojoo n’akwukwo ahu.
11. Otu ndi otu (ihe 15) – 2018 abụghị afọ gị, Jesus. Ọchịchọ ka mma n’ihu na 2019.
12. Full Tilt Poker (8 isi) – Laughable. Ezigbo ihe ọgụgụ isi zuru oke.
Ekwesịrị m ịlele ma ọnụọgụ 44.5 ahụ bụ akara kacha mma edepụtara t Enforcement Section, na-ekele onye mmeri ọhụrụ anyị, Anthony Pitassi! Ma – ị maara na anyị ejirila ndị egwuregwu kachasị mma emechaa. Oge eruola mgbe ị ga-achọpụta ihe ọjọọ ogbugbu ahụ only t Week 13 na-egwu na ol’DFFL. Asatọ nwere ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ losses. Ihe ọ bụla nwere ike ime… Ọfọn, mgbe ahụ – Ka anyị jụọ ajụjụ ahụ a ma ama.
Gịnị Ka M Na-eche? ”
Echetara m iche echiche banyere oke ihe m mebiri ntọala ntọala m Izu 13 (23 isi na-efu t seat ), d e M ga-abụ nnukwu dope nke izu. Mgbe ahụ, m lere anya na isi nke ọzọ, wee chọpụta na m mechara – Ise.
OMIGOSH! Ọfọn, ọ bụrụ t m agụchaghị mbụ, onye only real??
Ọ dịghị onye ọzọ karịa nwoke ahụ chọrọ nhụcha bench-WWIT asaa zuru oke iji gwụ na eriri ụkwụ dị n’elu WWIT.
Jose Cano, nke “Mara mma Ogbe Ndịda Burbank.”
Jose tụfuru ngụkọta nke 31 isi t seat un t izu 13, websiten’aka Josh Allen (16), ndị Ravens D / ST (11), na kicker ya, Hopkins (4), dị mma maka isi 7 WWIT, Dont tie maka nke mbụ na WWIT. Nke a bụ nke atọ nke WWIT nke Jose, na nke mbụ Grant Herman. Ekele diri unu abuo, unu kwesiri ya. (Chere, nke ahụ jọgburu onwe ya. Ma mara mma. N’otu oge ahụ.)
Ebe nke abụọ na Izu 13 WWIT? Anthony Pitassi, Professional onye mmeri! (Ihe 28 furu efu! ) ) Nke atọ – Onye ọzọ na – ama jijiji – Gbaa & Egbe! (27) Trojans na FTP nwetara otu WWIT ọ bụla, maka ịghara iwepụ ihe ọjọọ na izu ụka a.
Ọ bụ afọ nzuzu. Upward bụ ala, ala bụ elu, na m jọgburu onwe m ịtọ m lineups. Odi mma, ka anyi kechie nwa a!
G WASN WAS Y I NA-ECHE EGO – IZU IZU IHE 13 – 2018
1. Nnụnnụ ruru unyi (-33 isi) – Ọkara decoration gị….
1. Mara Ogbe Ndịda Burbank (-33 isi) – Na ọkara nke ihe egwuregwu gị.
3. Pop-Gun Run (-27 ihe) – Gini bu ihe a? Nke atọ, Ron?
4. Hoarse-Men (-25 isi) – Mara na ọ gaghị emeri ihe a.
5. Aha na-enweghị aha (-24 isi) – B SIRI na Nwoke a ga – emeri nke a.
5. Nsogbu Trojans (-24 isi) – Ọ dịghị mgbe ọ bụla.
7. Kasị njọ Gosi na Akwụkwọ (-23 isi) – N’ogige atụrụ na akwụkwọ elu, ọ dịghị dais.
8. Grim Reeker (-22 isi) – Egwuru egwu nke ọma ịlụ ọgụ.
9. Nwụrụ Anwụ na Ubi (-19 isi) – Robert nwere ezigbo ọsọ, dịkwa.
10. Poker zuru ezu nke egosiputa (-19 isi) -23 isi efu? Chei, M Gbalịrị ịkwado ya.
11. Maazi Abughi-ka-Chioma (-15 isi) – Expert Champ!
12. Dolts (-10 isi) – Ikpeazụ ebe bụ ihe dị mma, Commish!
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe niile maka izu a, ndị enyi. Jisie na playoffs ya niile ndị only post-oge. “Ka usoro ihe ọmụmụ gị dị mma karịa nke m.” (Adịghị ike.)
Dị ka oge niile, enwere m ozi ịntanetị niile iji zipu akwụkwọ parakeet kwa izu, na Tuesday, na-agakarị na ehihie. Fọdụ n’ime unu enweghị Microsoft Office / Word? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, lelee WWIT kwa izu na www.theacescasinoblog.com. Ọ ga-anọ ebe ahụ! Lee gị n’afọ ọzọ!
WWIT – Izu 11 – DFFL Akwụkwọ Akụkọ
Izu 11 – Anyị ga – abụrịrị “ọchịagha” karịa ọfụma
Ọ kụrụ m…. Anyị na-aga IZU IRI NA ABWỌ? BANYERE? Ọ dịka ọ dị anyị ka anyị malitere igwu egwu n’izu gara aga. Izu abụọ ọzọ, na 2018 DFFL Playoffs ga-amalite. (Mara: Ozi sitere na kọmishọna Francis – Cheta, ndị nke gị na – eme ihe ngosi 2018 DFFL – You nwere ike bulie onye ọkpụkpọ ọzọ ga – ewepụ waya iwepụ ma ọ bụrụ na ị tara ahụhụ ọnya”IR / Outside” na otu isi gị ma, mgbe that I buliri onye ọkpụkpọ, Ọ ghaghị ịmalite,n’izu na-abịa.
Ebe ọ bụ na njikọ ahụ ga-emechi’ọnụ ụzọ un maka oge 2018, anyị ga-agbakwunye akụkọ akụkọ ọzọ na kọlụm WWIT anyị na ngalaba na-esote, mana, ugbu a, nke a bụ ihe ncheta. “Tidbits” dị ukwuu, ma anyị na-niile ebe a ịhụ na bastion nke mediocrity ese ke urua 11 nke “ọgụ.” Oge eruola ịza ajụjụ ahụ afọ iri na abụọ…
More kindly DFFL”Ọsọ maka Mediocrity” mgbe electronic mesịrị. Nke mbu – DFFL Playoff Headlines! Ka anyị leba anya n’agbụrụ egwuregwu egwuregwu na-akpụzi.
Lombardi – Ndị Norsemen na Bolts abụọ na-anọdụ na 5-na-6 na oge yana egwuregwu abụọ fọdụrụ. Mara: Rob’s Norse Crew nwere h / h tiebreakern’aka un ma nwee ike merie nkewa website Id mmeri ọzọ na Bolts na Izu 13.
Halas – The Grim Reaper chọrọ naanị otu mmeri ma ọ bụ mfu website Id MGL iji kechie aha nkewa, yana ikekwe mkpụrụ egwuregwu # 1. 7-and-4 MGL franchise dị ka otu egwuregwu egwuregwu egwuregwu siri ike nke anụ ọhịa ma nwee ike ịgbagha aha nkewa na Reaper na mmeri two na-esote oge.
Shula – Ugolo Baltimore nwere ike kechie aha nkewa website t mmeri YNH / LGJ na izu 12. Ọ bụrụ na LeGOAT merie, ọ bụ ọgba aghara na nkewa na otu izu fọdụrụ. Nwere ike ịbụ nkewa onye ọ bụla.
Landry – Poker Tilt Pull nwere ike kechie aha nkewa na bye nke mbụ na-etinye aka na mmeri ọ bụla na Trojans na Izu 12 ma ọ bụ ọnwụ nke Burbank Thumpers, ma ọ bụ mmeri na Week 13 na Grim Reaper.
E Nwere ndetu DFFL gị nke izu! Na – esote – ka anyị laghachi na azụmahịa na kọlụm WWIT, bido na Professional Section.
Na, dị ka e burun’amụma, ọ bụghị otu, mana abụọ zuru oke na-agbapụta na Izu 11 Expert docket – Otu websiten’aka onye kọmishọna anyị that a ma ama, Jim Francis nke Bolts, na nke ọzọ website Id nwoke na-achịkwa ngalaba Halas ugbu a na ndekọ kachasị mma na ndị DFFL, Maazị Alan Sullivan. Ndị ahụ zuru oke ga-anata isi 7 Expert maka akara dị alan’izu, gbakwunyere isi ihe abụọ Guru maka akara zuru oke. Wonderful goin ‘,’ ndi nwem!
Ihe nrite ọlaọcha”Professional”n’izu that a na-aga na ndị bi na Cowboys lover, Robert Abundis nke Killing Fields, bụ onye tinyere izu ọzọ mara mma nke isi website Id ịhapụ naanị otu isi t seat. Nke ahụ ga-adị mma maka isi 5 Expert, nke na-eme Robert ka ọ bụrụ eriri maka ebe nke abụọ na Professional Section. Jesus Cortez nke Mob Squad na-ewetara nsọpụrụ nke atọ na isi ihe 3 Professional website na ịhapụ naanị two isi na oche ya. (Anyị ga-enye FTP, Norsemen, MGL, Burbank, na Trojans otu izu na-akwụ ụgwọ n’izu a.)
Ma – Mgbe uzuzu kwụsịrị na Week 11, onye obibi anyị bụ Expert, Anthony Pitassi, nọgidere na-ebute ụzọ 11.5 unn’elu mkpọ ahụ, ka ọ fọdụrụ naanị izu abụọ. Izu nke iri na abụọ nwere ike idozi ihe, anyị ga-ahụ etu ihe si aga.
Ọ D OK MMA, lee otu ha si guzo ugbu a mgbe izu nke 11 nke 2018 DFFL Professional Division, dị naanị izu two nke egwuregwu fọdụrụ….
MGBE MBEN – IZU IRI 11 – DFFL 2018
1. Maazị Go Kechioma (44.5 isi) – Anthony jidere isi 11.5 ya. Kwadebe ngwaike.
2. Ubi na-egbu (ihe 33) – ọkara nke abụọ siri ike nke Robert etinyela un t ngwakọta
2. Mkpọchi (33 isi) – ezimezi oku n’izu na-abịa, mgbe Bolts / Norsemen na-azọ maka aha nkewa
2. Burbank Thumpers (33 isi) – N’agbanyeghị nke a, ma chọrọ that a zuru oke ka nwere ogbugba
5. Aha gị Ebe a (isi 29) – Enweghị akara dị mma n’izu a, nwere ike ịpụ na ya.
6. Run & Gun (24 isi) – 2018 bụghị afọ Ron. Ọ ga-alaghachi n’afọ ọzọ.
7. Trojans (isi 21) – Nnukwu aha nke na-agbaji kwa izu kwa izu na oge a.
8. Baltimore Ravens (ihe 20) – Lee n’okpuru. Nwa okorobịa a more”na-agagharị.”
9. Onye na-ewe ihe ubi (ihe iri na itoolu) – izu ọzọ dị mma maka onye na-ewe ihe ubi na-agba agba.
10. Otu ndi agha (ihe 10) – Na-amụmụ ọnụ ọchị na nnukwu Rams ‘mmeri na abalị Monday
11. Norsemen (isi 8) – Igha anwu chere egwuregwu Bolts na Izu 13
11. Full Tilt Poker (8 isi) – Obi ebere. Enwere ike ịkwaga na ebe iri, mana o yikarịrị ka ọ gaghị.
Ma akara – M. Ọzọ. 8 isi na izu 11? Egwu.
Nke ahụ bụ maka Professional Section. Ọ dịka ọ bụ Anthony ka akpọchiri nwa ahụ, belụsọ na ihe ọ bụla mere n’izu abụọ na-abịa. Ọ D – MMA – Ka anyị rute anụ na poteto nke kọlụm a, ndị enyi m. Anyị kwesịrị ịchọpụta onye kwesiri ịkpọ hotline psychic maka enyemaka na nhazi ha, mana kpebiri “gaa naanị ya,” ma mebie ihe niile. Oge erugo ịjụ ajụjụ….
Dị ka ọ dị na mbụ, Dunn-Edwards Fantasy Football League a siri ike ime ihe na-agbagha mgbagha, ma na-agbatị echiche nke akara akara anyị gafere mpaghara nkwenye.
Gịnị ka nke a nwere ike ịbụ, ị na-ajụ? Dị Mfe.
Na Izu 11 WWIT na-egwu, anyị enweghị otu, mana ìgwè abụọ nwere akara ọgụgụ isi… NA WWIT isi, n’otu izu. Ana m agwa gị, Naanị na DFFL.
Anyị ga-enweta ndị “pụrụ iche” franchises nke mere aha ọjọọ “abụọ-egwu” ikpeazụ izu ụka a nkeji…. Mana nke mbụ, ka anyị nyefee WWIT ihe nrite ọla edo na aha nke furu efu onye na-atụ 29 isi t seat na Izu 11 egwuregwu –
Grant Herman, nke ndị Baltimore Ravens.
Grant benched the Colts (megide aro nna ya), ọ nọdụrụ Adam Humphries (mgbe that a gwara ya na ọ ga-enwe ezigbo izu), ma dinaa Josh Adams nke ndị Eagles (ihe ịtụnanya). Ozi ọma ahụ? Onyinye Grant’s Ravens meriri egwuregwu Izu 11 un t ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe 30! Akụkọ ọjọọ? Ihe 7 WWIT meriri maka nke a malfeasance nke lineup nhọrọ emewo ka Grant n’ime elu ntụpọ na anyị kpara “Gịnị ka m na-eche” mpi na nanị izu abụọ na-egwu.
Tozọ na-aga, nwa! (A sị na m ga-ahapụ ihe 29 t seat m, adorable gaa akara 125 na egwuregwu.)
“Ọ dị mma, Steve, gwa anyị banyere ìgwè” egwuregwu abụọ a “!” Mba, akabeghi… Ka anyi gaa na WWIT nke ritere ihe nrite ọla ọcha (ee, enwere mmadu abuo), na ihe ijuanya nke a bu – Otun’ime ndị ritere ọla ọcha bụ aha DFFL nke bụ LEGENDARY ebe a na-eme ngagharị oge iji maa aha a”triumph” at WWIT – Aha gị Ebe a, nke Ryan Francis na-eduzi ugbu a, onye tụfuru 23 isi t seat na Izu 11. Na – Onye ọzọ na-esote kwa izu nke abụọ, Ron Bolton, nke ndị otu niile, tụfuru 23 isi na HIS seat. Ulo oru abuo a natara isi 5 WWIT, na ekele anyi, maka imeputa ihe isi
Ọ D, MMA, lee, anyị ga-aga… Ndị otu egwuregwu abụọ ahụ bụ”Bronze medalists at WWIT for Week 11. Anyị nwere eriri maka oche kachasị njọ n’izu a – Rob Mielke nke ndị Norsemen, na Jose Cano nke Burbank Thumpers. Ihe abuo abuo furu efu (ị dịla njikere?) IHE SI B TO B TO N’TOLỌ HA B na izu 11.
ISI. Otu abụọ that a nwetara akara mwepu-3 WWIT maka ịkwụsị isi ihe isii d e oche ha maka izu ahụ, na, dị ka e kwuru na mbụ, KWES receivedR obtained natara otu GENIUS mgbe ọ bụla maka ọnwụ otu izu maka izu ahụ. Naanị DFFL nwere ike ime nke a. Oh, ọ bụghị naanị nke ahụ, mana Jose na-anabatakwa isi abụọ EXTRA WWIT maka ịghara ịkwado IR kicker maka onye ọzọ na-egwu egwu.
Ndị DFFL. (Ọchị) Ọ dị mma, lee emelitere WWIT ings.
G WASN WAS Y I NA-ECHE EGO – IZU 11 IHE – 2018
5. Nnụnnụ Unyi (-26 isi) – Onye ndu ohuru, n’oge na-ezighi ezi n’afọ.
3. Hoarse-Men (-25 isi) – Kpomkwem “Rob-” bery, ma ọ mere.
5. Pop-Gun Run (-24 isi) – Ekwetaghị m ihe a. Nke a enweghị ike ịbụ. Ga-abụ mmeghe.
5. Ihe Na-enweghị Aha (-24 isi) -“Miller Transfer” na-eme ka’ọdịdị ya’ pụta!
1. Nsogbu Trojans (-23 isi) – Mara na ọ ga-ada website t atọ kacha elu.
1. Kasị njọ Gosi na Akwụkwọ (-23 isi) – Ka na-ekokwasị gburugburu ndị isi
3. Grim Reeker (-22 isi) – Perfecto t Enforcement Division na-ekwu ya niile.
9. Mara Ogbe Ndịda Burbank (-21 isi ihe) – Whatzup na ihe PK ahụ?
5. Nwụrụ Anwụ na Ubi (-19 isi) – N’agbanyeghị nke ahụ na-agba ọsọ, echere m. (Ọ bụchaghị.)
10. Poker zuru ezu nke egosiputara (-11 isi) – Echere m m si na ya pụọ. Enwere ike. (Ikekwe ọ bụghị.)
11. Maazị Ọ bụghị-Ka-chioma (-10 ihe) – Expert onye mmeri – na-eche.
11. Dolts (-10 isi) – Otu izu dị mma, ewepụkwara ya na WWIT
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe niile maka izu a, ndị enyi. Dị ka oge niile, enwere m ozi ịntanetị niile iji zipu akwụkwọ parakeet kwa izu, na Tuesday, na-agakarị na ehihie. Fọdụ n’ime unu enweghị Microsoft Office / Word? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, lelee WWIT kwa izu na www.theacescasinoblog.com. Ọ ga-anọ ebe ahụ! Nwee ezigbo izu!